पाँच सय दिएर काठमाडौं जेलबाट भागेका अपराधी काभ्रेबाट पक्राउ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल आज केन्यासँग भिड्ने
रमादान पर्वको सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास कुवेतको सार्वजनिक सूचना !! →
राजधानीको भद्रगोल जेलबाट अस्पताल जाने बहानामा प्रहरीलाई समेत बेवकुफ बनाएर भाग्न सफल २९ वर्षीय टेन्सन भन्ने डेनी लामा काभ्रेपलान्चोकको ठूलो पर्सेलबाट पक्राउ परेकाछन । काठमाडौंबाट खोजी गर्दै गएको प्रहरीको टोलीले १६ घन्टामा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर पुन: काठमाडौं ल्याएको छ । हातहतियार खरखजना मुद्दा साँढे तीन बर्षको कैदा सजाया भोगी रहेका टेन्सन कर्तब्य ज्यानको पनि अनुसन्धानमा थिए ।
भाग्ने क्रममा टेन्सनको हातमा लगाएको हतकडी उसैले लगेको बयान भगाउने हवल्दार हरिकृष्ण वस्तीले दिएका थिए । तर, त्यो बयान झुटा सावित भएको छ । टेन्सनसंग बयान लिएपछि दुवै हातमा लगाएका स्टीलका हत्कडी हवल्दार वस्तीको कोठामा रहेको फिल्टर भित्र आइतवार भेटिएको छ ।
वीर अस्पताल जाने बहानामा जेलबाट निस्किएर ट्याक्सी चढे लगत्तै टेन्सन प्रहरीलाई हतकडी फुकाल्न लगाएर उनीहरुसँगै डल्लुस्थित श्रीमती रहेको कोठामा पुगेको थाहा भएको छ । टेन्सनलाई जेलबाट हवल्दार हरिकृष्ण वस्ती र प्रहरी जवान तिर्थबहादुर ओलीले जिम्मा लिई लगेका थिए ।
त्यसपछि प्रहरीलाई आफ्नो कोठामै छाडेर टेन्सन एक्लै दाईको चमतीस्थित कोठामा पुगेका थिए । पक्राउ पछि उनले दिएको बयान अनुसार टेन्सन त्यसपछि डल्लु पुलपारी भगवान पाउ गएका थिए । त्यहाँबाट फर्केर उनी पुन: प्रहरीहरु बसेकै आफ्नो कोठामा पुगेका थिए ।
टेन्सनले आफनो कोठामा बसेका दुई प्रहरी मध्ये एक जवानलाई रु. पाँच सय दिएर पुन एउटा कागज छुट्यो लिएर आउछु भन्दै दाईको चमतीस्थित कोठामा जाने बहानामा उनी भागेका थिए । भाग्नु अघि उनले आफनो श्रीमतीबाट पाँच हजार पाँचसय खर्च समेत लिएको थिए ।
त्यसक्रममा उनले कुनै स्थानमा रक्सी सेवन गर्न समेत भ्याएको थाहाभएको छ । टेन्सनले दिएको बयान अनुसार डल्लुस्थित कोठा बाहिरैबाट ट्याक्सी चढी भक्तपुरको कौशलटार पुगेका थिए । कौशलटारबाट भने टेन्सन ठूला सार्वजनिक बस चढी काभ्रेस्थित आफनो गाउँ पुगेका थिए ।
गाउँ पुगे लगत्तै पाएको सूचनाका आधारमा सईको कमाण्डमा प्रहरीको छ सदस्यीय टोली उनलाई पक्राउ गर्न खटिएको थियो । काठमाडौबाट सई माता प्रसाद थापाको कमाण्डमा खटिएको टोलीमा सई रमेश बुढाथोकी, असई राजु भण्डारी, प्रहरी हवल्दार सुरज थापा, प्रहरी जवानहरु इन्द्रबहादुर थापा र भगवान उप्रेती थिए ।
खटिएको टोलीले टेन्सन बसेको स्थान पत्ता लगाएर डेढ किलोमिटर वरै गाडी रोकर पैदल खोज्दै जाने क्रममा डाँडा माथीको भट्टीबाट टेन्सन दुई प्रहरीलाइ लडाएर भागेका थिए । हाम फालेर भाग्ने क्रममा अर्का प्रहरीले उनकै जीउमा हाम फालेपछि टेन्सन पक्राउ परेका थिए ।
त्यसक्रममा सई थापाको हात भाँचिएको छ भने भाग्ने क्रममा टेन्सनको एउटा आखा, बायाँ गाला र खुट्टामा चोट लागेको छ ।
यसअघि ठमेलको प्रभु मनी एक्सचेन्स लुटिएको घटनामा पनि टेन्सन जेल परेको अपराधी हुन् । भाग्नु अघि पनि उनी अस्पताल जाने बहानामा तिनै प्रहरीलाई साथै लिएर टेन्सन विभिन्न स्थानमा धुम्ने गरेको खुल्न आएको छ । हवल्दार वस्ती र जवान ओली निलम्बनमा परिसकेको छन भने हाल कारागार नियमावली अनुसार कारवाहीका लागि हिरासतमा राखिएको छ ।
अपराधी टेन्सनले हतकडी खोलेर बाहिर स्वन्तन्त्र रुपमा धुम्न दिए वापत हेरक पटक हवल्दार र जवानलाई ४/५ हजार दिने गरेको समेत बताएकाछन । पैसा लिएवापत जेलबाट निस्केर ट्याक्सीभित्र पस्ने बित्तिकै पैसा लिने प्रहरीले दुवै हातको हतकडी खोलीदिने गरेका थिए ।
टेन्सन भागे लगत्तै प्रहरीले डल्लुमा बस्ने उनको श्रीमतीलाई अनुसन्धानका लागी नियन्त्रणमा राखेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले कोरियन, चन्द्र भन्ने राकेश लामा र आशिष भन्ने ग्याजेन तामाङ्गलाइ पनि क्षेत्रपाटीबाट अनुसन्धानका लागी नियन्त्रणमा राखेको थियो ।
हातहतियार खरखजनामा बोकेको अभियोगमा ३ वर्ष ६ महिनाका लागी जेल परेका टेन्सन एक साताअघि भागेका थिए ।
उनी बिरुद्ध कर्तव्य ज्यान र डा“का मुद्धाका आरोप समेत रहेको छ । टेन्सन यसअघि पनि जेल बसेका पटेक अपराधी हुन ।